I-Semalt ichaza Izinzuzo Zokuthumela Isivakashi nge-SEO yakho
Ukuthunyelwa kwezindwendwe kuthatha ukuthumela okuqukethwe kwakho kwenye iwebhusayithi. Ababhulogi basebenzisa le mboni ngokuyinhloko ukwandisa ukubonakala kwabo futhi bathole ithrafikhi. Ukuthunyelwa kwezindwendwe kuyindlela ephumelelayo esetshenziselwa ukuthuthukisa imizamo ye-SEO.
UMichael Brown, uManger Mack Success of u-Semalt uchaza indlela yokwenza iposi elihle kakhulu lezivakashi - scivoli per bambini da giardino prezzi auto.
Funda imithethonqubo ye-website oyibamba ngaphambi kokushicilela okuthunyelwe kwabavakashi. Okokuqala, kubalulekile ukuxhumana nomnikazi webhulogi. Iningi labantu lingathanda ukuthi uhambise okuthunyelwe okugcwele noma ubeke umqondo. Ukufunda imihlahlandlela ye-blog yakho ye-target kukusiza ukuthi unqume uhlelo lokuphathwa kokuqukethwe. Ezinye izinkampani ezifana ne-Joomla, i-WordPress noma i-Drupal zingase zifune ukuthi ube ne-akhawunti yomsebenzisi nabo ukuze kube lula ukulandela ama-imeyili ne-traffic, ikakhulukazi uma kunamathuluzi amaningi wokuzenzakalela we-SEO.
Yenza ngokwezifiso i-imeyili yakho ngaphambi kokuxhumana nomnikazi webhulogi. Ngomkhiqizo oyintandokazi, abantu bangakuthola ngokuqondile wena nokuqukethwe kwakho. Ababhulogi abahlukene bangadinga imininingwane ehlukene mayelana nawe noma okuqukethwe kwakho. Nikeza izizathu ezigcwele zokuthi kungani uzodinga okuthunyelwe kwabavakashi kulolo bhulogi. Uma kunesidingo, faka izixhumanisi kusuka kubhulogi wakho wangaphambilini.
Dala okuqukethwe okufanelekile. Khumbula njalo ukuthi okuqukethwe kumele kube ngabathengi abahlosiwe. Akufanele usebenzise lokhu njengethuba lokuba ukhulume ngawe, umkhiqizo, umkhiqizo noma isikhangiso..Dala okuqukethwe okuhambisana nezidingo zabo ngokuqondene nokuthi yini oyenzayo kuwebhusayithi yakho. Izilaleli ezihlosiwe zinesithakazelo kuphela kulokho okuthunyelwe kubhulogi yakho, futhi kufanelana nesidingo sabo.
Izinzuzo zokuthumela izivakashi
Ukuthunyelwa kwezindwendwe kuvumela izinkampani ukuthi zilandele amakhasimende anakho kusuka emgwaqweni kwenye ibhulogi. Ukwandisa ukuguqulwa kwewebhusayithi. Ukuthunyelwa kwabavakashi kunenzuzo ekusimweni kwewebhusayithi ku-algorithms ye-SERP. Ibhulogi iba negunya uma inezinye izikhala eziningi ezivakashelayo.
Ukudala ubuhlobo obuqinile namanye amabhizinisi kuyimfuneko. Ukuthunyelwa kwezivakashi eziphezulu kwenza isayithi ithuthukise ubuhlobo obuseduze nabanye ku-niche efanayo. Abantu abathintekayo nezinhlangano bancike ekuthunyeleni izivakashi zabo ukuze bafinyelele kuzigidi zamakhasimende. Ngezihlobo eziqinile, ngokuqinisekile uzozuza kulo mgwaqo.
Ukwakhiwa kwesixhumanisi kungolunye uhlangothi lokuthunyelwa kokufuna. Ukuthunyelwa kwabavakashi kungenye yezindlela ezilula zokuthola umkhondo. Ngesikhathi ukuthumela okuthunyelwe, uhlakulela okuqukethwe okwabelana ngamagama angukhiye ngamabhulogi wakho wezinhloso. Ngenxa yalokho, bobabili amabhulogi anenzuzo efanayo kanye nokuthola ukugeleza okuqhubekayo kwezivakashi eziye zahlungwa yi-blog yangaphambilini.
Okuthunyelwe kwezindwendwe kungabonisa izinkinobho zokushaya ucingo. Kunoma yiliphi isu lezokumaketha kwe-intanethi, ukuthola abafundi abafanele ukuchofoza isixhumanisi sakho futhi ufike ekuqukethwe kwakho yilona elibhekiswe phambili. Ngokuthumela okuthunyelwe, umuntu angakwazi ukubeka ezinye izinkinobho kuhlanganise nokushaya ucingo kuyadingeka kubhulogi yakho. Lezi zinkinobho zingakwandisa ithrafikhi yakho futhi ekugcineni yenza ibhulogi yakho idume. Kodwa-ke, kuwukuziphatha okuhle ukuqhubeka nokuqapha ngaleli thuba. Ababhulogi abaningi abadinga ukuthumela izivakashi bangase bangasekeli lo mbono njengoba izidingo zabo ngokuvamile zigijima kokuqukethwe kwakho.
Ukuthunyelwa kwezindwendwe kungakwandisa ukufinyelela kwakho kwamanye ama-niches amaningi. Njengoba kubonisiwe ngenhla, kuyasiza umuntu ukuba akhe ubuhlobo obuqinile nezinye izinkampani kanye nokwakha umkhiqizo wakho. Okubaluleke nakakhulu, ukuthunyelwa kwabavakashi kunomthelela emizamweni yakho ye-SEO, futhi kungenza ibhulogi yakho ibe phezulu.